August | 2016 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Children of the Dream by Ben Okri
August 31, 2016 drkokogyi
(Celebrates the 40th anniversary of Martin Luther King’s “I haveadream” speech withanew poem)
10 style or arts of speech စကားကြီးဆယ်ခွန်း
တန်ဖိုး -မထား မသိ မရှိ – ၂၁ရာစု ဒုတိယပင်လုံ ညီလာခံ
August 31, 2016 August 31, 2016 drkokogyi
Because DASSK said ပြည်သူလူထုရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးမယ်………တဲ့……May be they are trying hard to get dreams!
UN chief calls on Myanmar to make Rohingya citizens
31 Aug 2016 00:20
Myanmar’s Aung San Suu Kyi (R) shakes hands with UN Secretary General Ban Ki-moon (L) after their press conference at the Foreign Ministry office in Naypyidaw, Myanmar. (AP Photo/Aung Shine Oo)
Listen here @ VOA
နိုင်ငံခြားသားတွေကိုသာ လှိမ့်လို့ရမယ် ဦးရဲထွဋ်
အာနန်ကော်မရှင်၊ အကျိုးအကြောင်း၊ အကောင်းအဆိုးဆိုပြီး ဦးရဲထွဋ်ရေးနေတာ လေးပိုင်းရှိနေပါပြီ။ ဆောင်းပါးကောင်းတွေမုို့ တန်ဖုိုးထား စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
သို့သော် လူဆုိုတာ အကျင့်ဟောင်း စရိုက်ဟောင်းကုို ဖျောက်နုိုင်ခဲတာမို့ အပိုင်း(၃)ပါ သနားစရာဘင်္ဂလီဆိုတဲ့ အပုိုင်းက ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် သမိုင်းလိမ် အချက်အလက်တချို့ကုို ကောက်နှုတ် ချေပချင်ပါတယ်။
ဦးရဲထွဋ်က (ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နုိုင်ငံခြားသားတွေကို ရခုိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေ ရှင်းပြတဲ့အခါ ပထမဆုံး ပြောပြရတာက ဘင်္ဂလီတွေက ရခုိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးမှာ အနည်းစုဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဆိုတဲ့ မြို့နယ်နှစ်ခုမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်ခင်ထဲက ဘင်္ဂလီတွေ တိုးတိုးလာလိုက်တာ အခုဆို ရခုိုင်တုိုင်းရင်းသားက ၂% ၊၃% လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ရသေ့တောင်၊ စစ်တွေ ဒေသတွေဆိုရင် လူဦးရေအချိုးက ထက်ဝက်လောက် ဖြစ်နေပြီ။)လို့ ရေးထားပါတယ်။
အားလုံးပါဝင်ခွင့်မရသည့်အတွက် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ တက်ရောက်ရေး အစီအစဉ် ခွန်ထွန်းဦး ပယ်ဖျက်
ဩဂတ်စ်လ ၃၀ ရက် ၂၀၁၆
ဩဂတ်စ်လ ၃၁ ရက် နက်ဖြန်တွင်စတင်မည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအမည်ရ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံသည် အားလုံးပါဝင်မှု All inclusive မရှိဟုဆိုကာ သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦးက တက်ရောက် မည့် အစီအစဉ် ယနေ့ပယ်ဖျက်လိုက် သည်ဟုသိရသည်။
“ကျနော်တို့ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦးအနေနဲ့ ယူအန်အက်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ သူ့အနေနဲ့ ပါဝင်ဖို့ အဆိုပြုခံထားရတယ်။ ဒါမယ့် နဂိုကတည်းက ခွန်ထွန်းဦး က ကြေငြာထားတာ က All inclusive မဖြစ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးပါဝင်ခွင့် မရှိဘူးဆို လို့ရှိရင် သူ့အနေနဲ့လည်းဘဲ တက်ေ ရာက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆိုတာတွေ မလုပ်နိုင် ဘူးပေါ့နော်။ အဲ့ကြောင့် မို့လို့ အခု ရခိုင် AA ကိုးကန့် MNDAA တအာင်း TNLA အစရှိအဖွဲ့ အစည်း ၃ ခုကျန်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ သူ့အနေနဲ့ နဂိုပြောထားတဲ့အတိုင်း ဒီညီလာခံ ကိုတက်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” – ဟု သျှမ်းတိုင်းရင်း သားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် SNLD ပြောခွင့်ရှိသူ စိုင်းလိတ်က သျှမ်းသံတော်ဆင့် အားပြောပြသည်။